Iileta zeeposta: zeziphi kwaye zeziphi ezilungileyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Njengoyilo, kuya kufuneka unezinto ezininzi ezahlukeneyo ukuze ukwazi ukubonisa iiprojekthi kubaxhasi bakho ngeendlela ezahlukeneyo. Kananjalo kuba uya kuhlala ufuna olunye uhlobo lwezixhobo okanye olunye kuxhomekeke kwiprojekthi. Ke ngoko, ukuba nemithombo eyahlukeneyo kubalulekile. Nokuba ngoonobumba beeposta, iifonti zeenoveli, iifonti zezihloko ... kuya kufuneka uzilungiselele yonke into.
Kule meko, sifuna ukugxila koonobumba beeposta kwaye siza kuthetha nawe apha ngezantsi malunga nayo yonke into ekufuneka uyazi malunga nazo: indlela yokuzikhetha, luhlobo luni loonobumba onokukhetha, kunye neminye imizekelo yale mibhalo yakho Uyilo. Ngaba siza kuqala?
1 Ukubhalwa kweposta-nantsi into ekufuneka uyilumkele
1.1 Iimpawu zokubhalwa kweepowusta
2 Iifowuni zePosta: Iileta onokuzisebenzisa
2.1 Isiseko seGarde
2.2 I-Avenir elandelayo pro
2.5 Enye iMantra
2.8 Iphepha elihle
2.9 Ukubhalwa kweposta: Akunakwenzeka
Ukubhalwa kweposta-nantsi into ekufuneka uyilumkele
Ipowusta ayixhomekekanga kumfanekiso. Phatha isicatshulwa esithile, nokuba sincinci okanye sibanzi. Ke ngoko, ukunceda ukuqinisa umyalezo onikwa nomfanekiso, kubalulekile ukuba kuthathelwe ingqalelo umntu ofundayo, oko kukuthi, bangaboni nje umfanekiso, kodwa bafunde isicatshulwa nakwiseti yabo, iziphumo zikhangeleka ngathi nguwe.
Imvisiswano kwiipowusta akukho lula ukuyiphumeza. Kungenxa yoko le nto kuthatha ixesha elide ukufumana isitshixo. Gcina ukhumbula ukuba zininzi iindlela zoonobumba beepowusta, ukuba zineempawu ezahlukileyo kakhulu kwaye, ukongeza, iprojekthi nganye inokuhluka kwaye ifuna uhlobo oluchanekileyo lwefonti.
Ngaphandle kwento yokuba iipowusta, kunye nentengiso yokushicilela ngokubanzi, ayisathathi kangako kwiminyaka embalwa edlulileyo, iinkampani ezininzi zisabheja kuyo ukukhuthaza iminyhadala, iimveliso, iinkonzo ... Kwaye banikezela ukubonakala okuhle kuhlobo , Banika ukusondela kubaphulaphuli ekujoliswe kubo kwaye sisebenza ngokufanelekileyo (ukuba nje yenziwe kakuhle).
Sinomzekelo wangoku kwiposta yaseMadrid kwithenisi. Kuyo, ngoonobumba abakhulu, yayifundeka "EMadrid sisekunene," ibhekisa, okanye ekuqaleni injalo, kunyulo luka-Meyi 2021, apho iphiko lasekunene liphumelele. Kodwa enyanisweni ipowusta yayi malunga neNdebe yeDavis, kwaye encinci ilandela umyalezo: «nangasemva. Indebe yeDavis ibuyile ».
Ukuba uqaphela, sisicatshulwa esitsala umdla wakho, kwaye iifonti zeposta zizinto onokuzikhangela. Ke ufuna ukuba sikunike ezinye izimvo?
Iimpawu zokubhalwa kweepowusta
Ngaphambi kokukunika iifonti zoonobumba beeposta, kufanelekile ukuba wazi ukuba zeziphi iimpawu ekufuneka zizalisekisiwe. Enye yeyokuqala kukukhetha ezifanelekileyo. Ewe kuyakuthatha ixesha, kodwa ukusilela kungawulahla wonke umsebenzi wakho, kwaye ngokuqinisekileyo ayisiyiyo le uyifunayo.
Kulungile ukuba, xa usebenzisa ifonti, ungayidibanisi nezinye iifonti. Ipowusta ijongeka intle kunye nefonti efanayo, kodwa hayi ngeqela ukusukela ekuphela kwento oza kuyiphumeza kukuphazamisa umfundi, ngaphandle kokuba yile nto uyikhangelayo.
Kuxhomekeke kumyalezo, abaphulaphuli ojongana nabo, umxholo womyalezo, njl. Kuya kufuneka ukhethe enye okanye ezinye iileta zeeposta. Kodwa zonke kufuneka zihambisane nenyani yokuba zifundeka ngokulula, nokuba ukude; ukuba bangabhidanisi umfundi (umzekelo, kuba abazi ukuba babeka igama elinye okanye elinye); zihambelana nomyalezo; ehlengahlengiswe kubungakanani beposta (okanye indawo yokubhaliweyo kuyo) kwaye eyona nto ibalulekileyo ibonakala.
Iifowuni zePosta: Iileta onokuzisebenzisa
Ngoku, siza kuthetha nawe ngemizekelo yeeleta zeeposta onokuthi uziqwalasele ukuba phakathi kwezixhobo zakho. Zezi:
Le fonti yavela kwiminyaka eliqela eyadlulayo, ngo-1967, yiyo loo nto ngoku ithathwa njengohlobo lweediliya. Asikukhuthazi ukuba uninzi lweetekisi, kodwa kuphela ukuba ume ngaphandle.
Igqibelele njengokubhalwa kweeposta zokuvunwa okanye ukuba ufuna ukuyinika ubucukubhede obuhle kunye nobukhazikhazi.
I-Avenir elandelayo pro
Oku bekukwi-2019 enye yeeleta ezaziwa kakhulu kwiiposta, kwaye ngo-2021 kubonakala ngathi imeko izakuziphinda. Kulula kakhulu ukufunda kwaye ubambe umdla wakho, ukufumanela into ezimbini-nye.
Sele sikuxelele ngeBodoni ngamanye amaxesha. Yileta enezinto ezininzi ezisetyenziswayo, enye yazo yeyokubhala.
Uhlobo lochwethezo luhle, lunemivumbo eshinyeneyo nenqinileyo kwaye ibukhali kwaye iyafundeka. Ngaphandle kokuba "iklasikhi", inyani kukuba iileta zeposta zisebenza kakuhle, ke unokuyithatha.
Uhlobo lohlobo oludala kunolo siqale ngalo, olwenziwe ngo-1927 ngu-Paul Renner. Yenye yezona zisetyenziswa ngoku kwaye isetyenziswa ziinkampani ezinkulu ezinje ngeIkea okanye iOpel.
Ngeli xesha siza kuphuma kwi "linear" kancinci, kuba ngolu hlobo lwefonti unobuntu. Kwaye zininzi iinkcukacha ezenza ukuba ibonakale, ke ukuba awunaso isicatshulwa esininzi, kwaye ufuna ukuba iphinde ibambe kwaye ngokwayo ibe uyilo, unokukhetha.
Ewe asiyicebisi ngeetekisi ezinkulu.
Kwiiprojekthi zesitayile se-cyberpunk le inokuba yenye yeendlela onokuzisebenzisa. Yileta yexesha elizayo esekwe kwi-astronomy, eneeprojekthi ezinxulumene nekamva, indawo, njl. banokuza ngokugqibeleleyo.
Kule meko, olu hlobo lohlobo lokuchwetheza lunika umoya othile kwii-70s zencwadi ezinoqweqwe, ezinokuthi, ukulungiselela iiposta zeediliya, zibe zezifanelekileyo. Kwakhona kubaphulaphuli abancinci, abanamandla kwaye, nangona kubonakala ngathi kukudala, inyaniso kukuba kunye neengqungquthela kunye neemilo ezijikeleziweyo zihambelana kakuhle noko kunxibileyo.
Kwisihlwele esincinci, unayo le, iPhepha elihle. Iileta zabantwana okanye iipowusta zolutsha ezithi, nangona zizokuhombisa, zifunde kakuhle kwaye zinike ukubamba okungaqhelekanga kumyalezo ofuna ukuwupapasha.
Ukubhalwa kweposta: Akunakwenzeka
Uhlobo olunye lohlobo olubonakala ngathi lubhalwe ngesandla yile. Yifonti eguquguqukayo kakhulu kwaye ungayisebenzisi kungekuphela njengonobumba weeposta, kodwa nakwizinto zokubhala, iilogo, uphawu ...
Zininzi iindidi ezininzi zeeleta zeeposta, zininzi iifonti, kodwa ngenxa yeso sizathu kufuneka uthathe ixesha lokufumana eyona ilungele iprojekthi. Ngoku, ukuba unezinto ezithile kunye nezitayile, kuya kuba lula kuwe ukubona ukuba ingabonakala njani kwiiprojekthi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Ukubhalwa kweepowusta